Online Marg | आज ४ बजे मन्त्रीको सपथ खान लागेका देवेन्द्र पौडेलले आफ्नै ड्राइभरमाथि यतिसम्म गरेको खुलासा !
आज ४ बजे मन्त्रीको सपथ खान लागेका देवेन्द्र पौडेलले आफ्नै ड्राइभरमाथि यतिसम्म गरेको खुलासा !
२०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल बनेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) त्यसयता तीन पटक आफ्नै नेतृत्वसहित पटक–पटक सरकारमा गयो । दर्जनौँ पटक पार्टी सरकारमा जाँदा अधिकांश नेताहरुले दोहोर्याई, तेहेर्याई मन्त्री बन्ने अवसर पाएपनि केही नेता भने त्यस्तो अवसरबाट बन्चित हुँदै आए ।
पटक–पटक पार्टी सरकारमा जाँदा पनि मन्त्री बन्न नपाएका हालको स्थायी कमिटीका एक मात्र नेता हुनुहुन्छ – देवेन्द्र पौडेल । खुला राजनीतिको लगभग १६ वर्षे अवधिमा केही नेताका श्रीमान–श्रीमती नै मन्त्री बनेपनि पौडेल भने कर्नरमा पर्दै आउनुभएको थियो ।
“सांसद खान माओवादीमा फर्किनुभएको थियो,मन्त्री बन्न लाग्नुभयो ।” त्यसो त,पौडेल केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा पनि मन्त्री बन्ने चर्चा थियो । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुँदा माओवादीका एक मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर पौडेललाई पठाउने गरी प्रचण्डले तयारी गरेको बताइएको थियो ।
तर,बाग्लुङकै अर्का नेता डा. सूर्य पाठक बाधक हुँदा उहाँको सिंहदरबार यात्रा रोकिएको तत्कालीन नेकपाका नेताहरु सुनाउने गर्थे । एउटै जिल्लाका दुई नेताबीचको स्थानीय अन्तविरोधका कारण केपी ओलीलाई भनेर पाठकले पौडेललाई रोकेको भन्नेहरु अहिले पनि छन् ।
पौडेलले अवसर नपाउनुमा अर्को पनि कारण छ । तत्कालीन एकीकृत माओवादीमा अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईबीच अन्तरविरोध चर्किंदा पौडेल भट्टराईतिर लागेर प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकार बन्नुभएको थियो ।
यता,स्रोत नखुलेको साढे ३३ लाख रुपैयाँ लुकाएको आरोप पनि यहीबेला पौडेलमाथि लागेको छ । सुवर्ण अर्याल नामक व्यक्तिले ग्लोबल आइएमइमा रहेको पौडेलको खाता (१७०७०१०००२०४७) मा २०७७ साउन ८ गते ३३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ जम्मा गरेको भौचर बाहिरिएपछि यस्तो आरोप लागेको हो ।
सांसद खानैका लागि पौडेल बाबुराम छोडेर माओवादीमा फर्किएको भन्नेहरु पनि छन् । तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको रोचक किस्सा सुनाउँदै निकट स्रोत भन्छ – सांसद खान माओवादीमा फर्किनुभएको थियो,मन्त्री बन्न लाग्नुभयो ।
कुरा के रहेछ भने, बबरमहलस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा नयाँ शक्तिको केन्द्रीय समिति बैठक बसिरहेको थियो । बैठकको वीचमा जुरुक्क उठेर पौडेलकी श्रीमती बलावती शमाले भन्नुभयो, ‘बाबुराम दाइको पार्टीमा लागेर जीवनभर सांसद बन्न सकिंदैन । त्यसैले हामी माओवादीमै फर्कनुपर्छ ।’
नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा पौडेल पुराना नेता हुनुहुन्छ । कठिन संघर्ष गरेर यहाँसम्म आइपुग्नु भएकोमा पनि कुनै दुई मत छैन । राजनीतिक योगदान र हालसम्म अवसर नपाएका हिसाबले मन्त्रीका लागि त झन् उहाँ योग्य पात्र नै हो । तर, आफूमाथि उठेका यस्ता प्रश्नको जवाफ नदिई सिंहदरबार यात्रा स्वयं पौडेलका लागि पनि सुखद नहुन सक्छ । जनआस्थामा खबर छ ।
Tags :देवेन्द्र पौडेलमाओवादी केन्द्र